ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
विना न्याैपाने उज्यालाे
शुक्रबार १४ फ्रेबुअरीको दिन बिहानै कफी लिन पसल गएको थिएँ । पसलमा अन्दाजी सात वर्षको बालक भेटियो । मलाई देख्नेबित्तिकै उसले भन्यो, ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे’ । सुनेर अचम्म लाग्यो । एकछिन त के भनौँ के भयो । पछि ‘थ्याङ्क यु बाबु’ भनेँ ।
उतिखेरै उसले ‘सेम टु यु’ भन्नुपर्छ भन्यो । ओके छ त, ‘ल सेम टु यु’ भनेँ । त्यो बालक रमाउँदै ‘एस्, आई एम् सो ह्याप्पी’ भन्दै रमाउन थाल्यो ।
‘मलाई हजुर अस्ति नै देखि धेरै मन परेको थियो । आज त झ्याप्पै भेटेंँ’, त्यो अन्जान बालकको मुहारमा खुशी देखेँ ।
सपना बिग्रँदा र छाती चर्कँदा सन्तानलाई के भयो होला ? कस्तो अवस्थामा छन् होला ? भन्ने आशङ्कामा रातभर जागा रहने आमाबुवालाई वास्ता नगर्ने युवायुवती ‘रोज डे’, ‘किस डे’, ‘चकलेट डे’ र ‘भ्यालेन्टाइन डे’ को व्यग्र प्रतिक्षामा बसिरहेका हुन्छन् ।
जे जस्तो डे र दिवस भए पनि यस्ता अवसरमा यस्ता दिवसले सबैलाई नि:स्वार्थ माया गर्न सिकाओस् । पत्थर बन्दै गइरहेको मानव मुटुमा थोरै भए पनि प्रेमभाव भरियोस् । ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे !’